Vaccine Poliomyelitis Oral (Opv) (ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး (သောက်ဆေး)) - Hello Sayarwon
Vaccine Poliomyelitis Oral (Opv) (ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး (သောက်ဆေး))
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Vaccine Poliomyelitis Oral (Opv) (ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး (သောက်ဆေး))
Vaccine Poliomyelitis Oral (Opv) (ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး (သောက်ဆေး)) ကဘာလဲ။
Generic Name: Vaccine Poliomyelitis Oral (Opv) (ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး (သောက်ဆေး)) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Vaccine Poliomyelitis Oral (Opv) (ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး (သောက်ဆေး)) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Vaccine poliomyelitis oral (OPV) ဟာ ပိုလီယိုရောဂါကာကွယ်ဆေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးဟာ ပိုလီယိုဗိုင်းရပ်စ်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ခုခံအားစနစ်တွေ ခန္ဓါကိုယ်ကနေ ထွက်ရှိလာအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး အသက်ခြောက်ပတ်ရှိတဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာ ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး စတင်ထိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသား လူကြီးတွေအတွက်လည်း အောက်ပါအခြေအနေတွေမှာ ထိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
• ပိုလီယိုလူနာတွေကို ပြုစုကုသပေးနေရတဲ့သူတွေ စတဲ့သူတွေမှာ ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး ထိုးထားသင့်ပါတယ်။
Vaccine Poliomyelitis Oral (Opv) (ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး (သောက်ဆေး)) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဒီဆေးကို သောက်ဆေးအဖြစ် သုံးစွဲရပါတယ်။
Vaccine Poliomyelitis Oral (Opv) (ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး (သောက်ဆေး)) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Vaccine poliomyelitis oral (OPV) ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ vaccine poliomyelitis oral (OPV) ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ vaccine poliomyelitis oral (OPV) ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Vaccine poliomyelitis oral (OPV) ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Vaccine poliomyelitis oral (OPV) ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Vaccine Poliomyelitis Oral (Opv) (ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး (သောက်ဆေး)) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Vaccine poliomyelitis oral (OPV) ကိုမသုံးစွဲခင်မှာ အောက်ပါအချက်တွေရှိရင် ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောရပါမယ်။
Vaccine poliomyelitis oral (OPV) ရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ ဒါမှမဟုတ် အခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
သင်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ခုခံအားကျဆင်းနေတဲ့ သင့်အိမ်သားတွေထံကို ပိုလီယိုရောဂါ ကူးစက်နိုင်ချေ အပုံ ၂.၂ သန်းပုံမှာ ၁ ပုံလောက် ရှိနေပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးချင်တာတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းပါ။ အသက် ခြောက်ပတ်အောက် ကလေးငယ်တွေမှာ ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ အသက် ခြောက်ပတ်အထက် ကလေးတွေမှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက လူကြီးတွေမှာဖြစ်တာနဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးဝါးအများအပြားကို အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေမှာ စမ်းသပ်ထားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် အသက်ကြီးသူတွေမှာ ဒီဆေးက ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကို သေချာစွာ မသိရပါဘူး။ အတိအကျ လေ့လာထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ မရှိသေးသည့်တိုင် အသက်ကြီးသူတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဟာ လူငယ်၊လူရွယ်တွေမှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Vaccine Poliomyelitis Oral (Opv) (ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး (သောက်ဆေး)) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Vaccine Poliomyelitis Oral (Opv) (ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး (သောက်ဆေး)) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဘယ်ဆေးတွေက Vaccine Poliomyelitis Oral (Opv) (ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး (သောက်ဆေး)) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Vaccine poliomyelitis oral (OPV) ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Vaccine Poliomyelitis Oral (Opv) (ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး (သောက်ဆေး)) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Vaccine poliomyelitis oral (OPV) က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Vaccine Poliomyelitis Oral (Opv) (ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး (သောက်ဆေး)) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Vaccine poliomyelitis oral (OPV) ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အောက်ပါကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေ ရှိနေရင်ပေါ့။
• မိသားစုထဲတွင် ခုခံအားချို့တဲ့ခြင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများဖြစ်ဖူးသူ ရှိခြင်း။
Vaccine Poliomyelitis Oral (Opv) (ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး (သောက်ဆေး)) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
vaccine poliomyelitis oral (OPV) ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Vaccine poliomyelitis oral (OPV). http://www.mayoclinic.org/drugs-
Vaccine poliomyelitis oral (OPV). https://www.drugs.com/mtm/polio-vaccine.html.